NextMapping | Ọdịnihu nke Ọrụ | Cheryl Cran
Olee otú NextMapping™ ọrụ
Iji usoro dị mkpa iji nyere gị aka ịnyagharịa na ọdịnihu ọrụ - anyị na - enyere gị aka ịkọpụta ihe na - esote ụlọ ọrụ gị, ndị isi gị na ndị otu gị ma hazie ihe ị ga - eme ọdịnihu dị njikere now.
Onye anyi n’enyere aka
Ndị isi gị adịla njikere maka ihe na-esote? Ndị isi gị hà nwere 'nkà ị ga-enwe n'ọdịnihu' iji duzie mgbanwe ndị achọrọ iji ruo ebe ahụ? Anyi nwere otutu uzo iji nyere ndi ndu aka idi njikere ugbua.
Ndị otu gị ọ na-emebi ihe ma mepụta ihe? Anyị nwere ngwaọrụ iji nyere ndị otu gị aka ịbụ ndị isi na-agbanwe agbanwe na-ekepụta ihe ga-eme n'ọdịnihu.
Youbu onye ahia aka na adi njikere igha n’ihu? Ma ị bụ azụmaahịa guzobere ma ọ bụ ịmalite, anyị nwere ike inyere gị aka ịkọwapụta ihe na-esote.
Strategic ọrụ anyị na-enye
Mụta na ịchọrọ na ozugbo.
Onwe-paced vidiyo nkuzi ya na ime ya ka i jiri otu NextMapping rụ ọrụ™ onye nkuzi.
Nyere ndị isi gị na ndị otu gị aka ịdị njikere maka ugbu a site na iji ihe ọhụrụ na usoro ọhụụ.
N'ike mmụọ nsọ, nyocha, atụmatụ bara uru na ihe ndị dị nkọ bụ ihe ị na - enweta mgbe ị na - arụ ọrụ na Cheryl Cran dịka onye na - ekwu okwu gị maka ihe omume mebere gị ma ọ bụ ihe omume. Ahaziri na mmekọrịta.
Oge a na-ejighị n'aka chọrọ kacha mma maka ndị isi na otu. Na-arụ ọrụ na anyị gbaara anyị akwụkwọ NextMapping™ ndị na-enye ọzụzụ iji bulie nkà iduzi, bulie echiche dị iche iche ma melite arụmọrụ ndị ọrụ dịpụrụ adịpụ.
Dị ka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ na obere obere etiti na ndị ọchụnta ego iji gosipụta azụmahịa ahụ n'ọdịnihu
ma wulite asọmpi, iji rụpụta ihe dị ezigbo mma n'ọrụ ma mejuputa usoro mgbanwe.
75% nke ndị isi CEO na-ekwupụta enweghị ndị ọrụ nwere nkà dị ka nnukwu ọdịiche na ịdị njikere n'ọdịnihu dị ka nzukọ.
Na NextMapping™ anyị na-enye ọtụtụ nhọrọ ọzụzụ na ụzọ dị iche iche iji nyere aka gbochie oghere nke ndị isi na ndị otu gị.
Nnyocha achọpụtala na ndị isi na ndị ọchụnta ego na-enweta nghọta dị omimi karị, echiche ndị bara uru na azịza ohuru
mgbe ị na-emekọ ihe n’obere ndị ọgbọ. NextMapping anyị pụrụ iche™ ichighaazu bụ site na ngwa naanị.
Lelee mmelite ohuru anyi
Otu esi eke ma meputa ya n’agba nke mgbanwe
Ọdịnihu nke ihe ịga nke ọma na-adabere na otu ma ọ bụ abụọ 'ndị dike' na azụmaahịa - ọdịnihu bụ maka 'anyị' yana otu esi emepụta ma mepụta ọsọ ọsọ nke mgbanwe.
Tinye akwụkwọ ugbu a na 50%
Mkpa ika ika n'oge nsogbu na otu esi ewere azụmahịa gị
Cheryl na Brad Breininger, onye na-arụkọ ọrụ ọnụ na onye na-eduga strategist na Zync banyere ọdịnihu nke ika ya na nke ọhụrụ.
NextMapping ™ Blog - G MoreKWUO
94% nke ndị isi ụwa nyochara bụ afọ ojuju ha gosipụtara okike ha.
77% nke ndị ọrụ chọrọ ndị mmadụ na mbụ - nke abụọ dijitalụ dị ka atụmatụ dị mkpa iji gbanwee azụmahịa maka ọdịnihu.
16% nke ụlọ ọrụ na-akọ na ha bụ ihe ịga nke ọma na mgbanwe dijitalụ mgbalị.
70% nke ụlọ ọrụ na-ekwupụta na ha emela nwee onyinye dị njikere n'ọdịnihu.
Fewfọdụ n'ime ndị ahịa anyị hụrụ n'anya iso na-arụ ọrụ